Magoha oo mamnuucay in ardayda ay dugsiyada u qaataan gacmo-nadiifiye | Star FM
Home Wararka Kenya Magoha oo mamnuucay in ardayda ay dugsiyada u qaataan gacmo-nadiifiye
Magoha oo mamnuucay in ardayda ay dugsiyada u qaataan gacmo-nadiifiye
Wasiirka wasaaradda waxbarashada ee dalka Prof. George Magoha ayaa macallimiinta ku amray inaynan oggolaan in ardayda ay dugsiyada la tagaan caagagga gacmo-nadiifiyaha ee loo yaqaano Sanitizer.
Waxaa uu hoosta ka xarriiqay in tallaabadan looga gol-leeyahay xaqiijinta badqabka carruurta.
Amarkan ayuu wasiirka soo saaray xilli uu saaka kulan la yeeshay saamiileyda tacliinta oo arrimo dhowr ah ka wada hadlay iyagoo ku sugan deegaanka waqooyiga Kariobangi ee ismaamulka Nairobi.
Magoha ayaa sidoo kale sheegay in ilaa iyo hadda boqolkiiba 99.9 ee arday ay dugsiyada dib ugu laabteen.
Waxaa uu sidoo kale xusay in dugsiyada ku yaalla 12 ka mid ah ismaamullada dalka lagu wareejiyay boqolkiiba boqol kuraastii loogu talagalay halka boqolkiiba 86 shakhsiyaadkii qandaraaskan la siiyay ay heleen lacagihii lagula heshiiyay.
Dhanka kale toddobaadka soo socdo ayaa lagu wadaa in dowladda ay gabdhaha ardayda ah u qaybiso suufka ay isku nadiifiyaan xilliga caadada.
Agabkan ayaa waxaa lagu qarash gelinayaa lacag dhan 470 milyan oo shilin.
Previous articleDHAGEYSO:Midowga musharaxiinta Soomaaliya oo ka digay in la siyaasadeeyo arrinta ku saabsan dhallinyaro tababar loo qaaday
Next articleMaraykanka oo xayiraad saaraya saraakiil u dhashay Tanzania